Rohingya Book-Shelf ရိုဟင်ဂျာ စာအုပ်စင် : 114 - သမိုင်းကိုဖာထေ့သူ (သို့) အချုပ်တန်းက သမိုင်းဆရာ
114 - သမိုင်းကိုဖာထေ့သူ (သို့) အချုပ်တန်းက သမိုင်းဆရာ
သမိုင်းကိုဖာထေ့သူ (သို့) အချုပ်တန်းက သမိုင်းဆရာ
လွန်ခဲ့သော လပိုင်းများအတွင်း မြန်မာ သန်းစိန်အစိုးရ ပါလီမန်ထဲတွင် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မေးမြန်မှုများရှိခဲ့ရာ ၀န်ကြီး ခင်ရီ အပါအ၀င် အခြားဝန်ကြီး အချို့က ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး စံကို ဆန့်ကျင်ပြီး အောက်တန်းကျကျ၊ လူမျိုးဘာသာ အစွန်း ရောက်သူများပီပီ ဖြေဆိုခဲ့သည်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံး အထူးအံ့သြခဲ့လေသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ပြောဆိုမှုကြောင့် ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ေ နကြောင်း ပြောဆို ချက်များကို နဂိုက သံသယရှိ နေသောသူများအဖို့ သန်းစိန်အစိုးရ အနေဖြင့် ကမ္ဘာကို လိမ်ညာ နေကြောင်း ထောက်ပြသက်သေထူနိုင်ရန် လုံလောက် ခိုင်လုံသော သာဓကတစ် ရပ်ဖြစ် လာရပါသည်။
ဤသည်ကိုပင်နားမလည်သော အစွန်းရောက် ရခိုင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးသမားဆိုသူများနှင့် RNF ရခိုင် အမျိုးသားတပ်ဦး ခေါင်းဆောင်များသည် ထိုလွှတ်တော်မှ ပြောဆိုရှင်းလင်းခဲ့သည့် အချိန်အခါကို အခွင့် ကောင်းယူ၍ ရန်ကုန်မြို့၌ အခမ်းအနားတစ်ရပ်ကျင်းပကာ Arakan ဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် ရခိုင်အမျိုး သား ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်သာ သက်ဆိုင်ကြောင်း အရှက်အကြောင်းကင်းကင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီး၊ ထိုအသုံးအနှုန်းကို အလွှဲသုံးစားမလုပ်ရန် တောင်းဆိုလာလေသည်။ ထိုတောင်း ဆိုမှုနှင့် ကိုက်ညီသည့် ထောက်ခံပြောဆိုမှုများကို ပြည်ပရောက် ရခိုင်အစွန်းရောက် ၀ါဒီများ ကလည်း အမျိုးမျိုးပြုလုပ်လာခဲ့ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပေသည်။ ယင်းတို့သည် ထို Arakan ဟုခေါ်သော အသုံးအနှုန်းသည် ယင်းတို့နှင့်မသက် ဆိုင်ကြောင်း ပြောဆိုပြီး၊ ၁၉ရ၄-ခုနှစ်တွင် ”ရခိုင်” ဟူသော အခေါ်အဝေါ်ကို အစားထိုးကာ ”ရခိုင်ပြည်နယ်” ဟူ၍ ခေါ်ထွင်ခဲ့သည်ကိုပင် သတိမေ့ဟန် တူလေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ထိုတောင်းဆိုမှုကို မှန်ကန်သော လုပ်ရပ်အဖြစ်ထောက် ခံရာတွင် သမိုင်းပညာရှင် ဆိုသူ ဒေါက်တာ အေးချမ်းက သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အ လက်အချို့ကို အောက်ပါအတိုင်း လိမ်လည်ဖော်ပြလာသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။
It was I, who gaveatalk about the term Arakan. I clearly pointed out how this term derived from Rakhine in the Portuguese Rakan or "Arakan or Aracao giving reference to original references in Portuguese. A historian is always loyal to the truth.” (Aye Chan)
အမှန်မှာ ဤဖော်ပြချက်သည် သမိုင်းပညာရှင် တစ်ဦးမှ ရေးသားသည်မှန်သော်လည်း သမိုင်းကို မုဒိမ်းကျင့် ရေးသားခြင်းသာလျှင် ဖြစ်ပေသည်။ တနည်းပြောရမည်ဆိုလျှင် ဒေါက်တာအေးချမ်းကို သမိုင်းပါမောက္ခ ဟု ယုံကြည်ကိုးစား နေသူများအားလည်း စော်ကားခြင်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဖော်ပြခြင်းကို လေးလေးနက်နက် ဆင်ခြင်မိပါက သမိုင်းမှန်ကို ထိန်းချန်လိုခြင်း တစ် ရပ်ဖြစ် ကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါသည်။
အထက်ပါ ဒေါက်တာအေးချမ်း၏ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာ ရေးသားသည့် အချက်ကိုထောက် ပါက မေးခွန်း ထုတ်လိုသည့် အချက်တစ်ချက်မှာ- ရခိုင်ကို “Rakan သို့ Arakan သို့ Aracao ဟု ပေါ်တူဂီ များက စတင်အမည်ထွင်ပေးဒါ လား၊ သို့၊ ပေါ်တူဂီများ ထိုဒေသကို မရောက်မီကတည်းကပင် ထိုဒေသကို Arakan ဟု လူသိခဲ့တာလား-ဟူသည့် အချက်ဖြစ်ပါသည်။
အမှန်မှာ ပေါ်တူဂီများမရောက်မှီ နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကတည်းက ထိုဒေသသို့ အာရဗ်ကုန်သည်များ လှည့်လှယ်ရောက်ရှိနေသော ဒေသဖြစ်ပါသည်။ အာရပ်တို့သည် အေဒီ-ဂ ရာစုမှစ၍ ရောက် ရှိနေပြီဖြစ် ကြောင်း ဒေါက်တာအေးချမ်းကိုယ်တိုင် သူ့စာအုပ်များ တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ အာရဗ်ကုန် သည်များ ၏ ခရီးသွားမှတ်တမ်းများအရ ထိုဒေသကို ယင်းတို့က Ar-Rukun ဟု ခေါ်သည် ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ပေါ်တူ ဂီများသည် ထိုအခေါ်အဝေါ်ကို အစွဲပြု၍ Rakan သို့ Arakan သို့ Arcao ဟု ခေါ်ထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရိုး ရိုးရှင်းရှင်း မရေးတော့ဘဲ၊ ထိုအခေါ်အဝေါ် အာရဗ်တို့မှ ဆင်းသက် သည်ဟူသော အဆိုကို ရှောင်ရှားလို သောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ လိုရာဆွဲ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by Rowannya at 8:39 PM